Uphahla oluphezulu lweebhari kunye neeBhari: Eyona yeeNdawo eziphezulu kophahla eLagos
Ibali likaGeorge Floyd: Ixesha kunye noHlaziyo lwamva
Tigama elithi "uphilile" alizukuyinqabela kwisixeko saseLagos, esidume ngokuba nobomi bayo obungendawo. Esi sixeko singaze silale njengoko iLagos ibizwa ngokuba yimigwaqo yeelokishi ezinye zeendlela eziphambili zophahla ngeli cala leAtlantiki. Akumangalisi ukuba ibizwa umzi ogqwesileyo. Imivalo yophahla kunye neendawo zokutyela ziyashukuma esixekweni sonke ngee-aesthetics ezintle kunye nokulinganisa iimenyu ukuya drool ngaphezulu.
Kukho into malunga nophahla lwophahla eLagos; ingaba yimvakalelo yokuba kude kakhulu kuzo zonke iziphithiphithi ezingezantsi okanye uziva nje ngokusela kunye nokutya kufutshane namafu? Mhlawumbi inento yokwenza nezimvo ezibonisa umdla esixekweni.
Into esiyaziyo ngokuqinisekileyo kukuba, inye kuphela into enokwenziwa xa ubushushu kunye nokufuma kufikelela ngamandla kusihlwa eLagos. Ingcebiso zethu? Fumana ibar yophahla kunye ne-sip kwindawo yakho oyithandayo.
Ke thatha ii-wallet zakho, khetha i-filter yakho ye-Instagram kwaye uthathe izinyusi ukuya nazo kumgangatho ophezulu njengoko sikhe sazenzela imigoqo encinci yophahla lwethu eLagos ukwenzela wena…
1. Ibarophahla eluphahleni yeofisi
Ukuba nedodo kunye ne-konifera entle ngelixa uthatha ii-cocktails ezikhethiweyo naphi na eLagos kuyonwabisa kodwa ukuyenza ukusuka ophahleni lweOfisi kuyomlingo ngokwenene. Le bar ibekwe kumgangatho wesibini wamanqaku amane nguSheraton Lagos ihotele ekwintaba yeVictoria. Imozulu ihlala ihleli ilungile kunye nebhendi yabo enobuchule bokuphila kwaye le yindawo elungileyo yokuchitha ngolwesiHlanu nangoMgqibelo ngokuhlwa.
2. Ibha yophahla Lokujonga
Umzi onabantu abaninzi baseLasgidi awunanto kule bar, iza nokuzola okunje unokucamngca njengakwindlu yeemonki, oko kunokuba yinto egqithisayo kodwa kusondela ngokwenene. Le bar ibekwe kumanzi e-Twin kwaye ngaphandle kwe-drone unokuba nembono yephupha lesixeko. Njengoko kulindelwe indawo yokuphumla ephezulu, abaphathi bajonge kakhulu ngokunxiba. Ke ukuba uphuma kwindawo yokuzivocavoca okanye isitayile saso sasivela eNye West, kuya kufuneka ukhethe omnye umhla wokundwendwela. Ungavumeli oko kukuthintele kuba banokufumana enye yezona zinto zilungileyo zeminwe zokujikeleza.
3. Ihotele yeLagos Continental
Ukuba ujonga uphahla eluphahleni eLagos enemigangatho yamazwe aphesheya apho uya kuphathwa njengasebukhosini, nantsi indawo eza engqondweni. Inebar ebambe uphahla yophahla lomthi kwindawo yesi-5 kwaye akukho nto ibetha kuyo itya iti ende ngasechibini ngelixa ithatha umbono opholileyo wenkunkuma. Ihotele zehotele ngaphezulu kwezakhiwo ezikufuphi ukuze, ukuba uyoyika ukuphakama, ungafuna ukuhlala kule ndawo, sisona sakhiwo sokwamkela iindwendwe eNigeria kwaye asiyi kumangaliswa ukuba uvumela ukubanjwa kwe-vertigo kukubamba - kodwa njengoko besitsho "phezulu, kokona kungcono ukubonwa", nangona kukho isinyusi ukuze ungazixhalabisi ngokuphelelwa ngamandla kukusebenzisa izitepsi. Imbonakalo yeqonga lesibhakabhaka ikhetheke ngokukodwa njengoko inika ibala lokulinganisa ukufikelela. Indawo entle yokunganqweneleki emva komsebenzi wosuku kunye ne-WiFi nantsi isantya selitye.
Le yeyona ndawo yokuphumla enama-Afrika kwindawo yaseSangotedo, eAjah ngaseNovare Mall. Nje ukuba iingxoxo zobugcisa zigqithile unokufumana ukucinga malunga noku-odola, ukusuka kwiklasikhi yeklasi ukuya kwisidlo sasemini / isidlo sangokuhlwa. I-vibe iyonke yeyasezidolophini, i-upbeat kwaye inesidima, kunye nebha enika iintlobo ezahlukeneyo zomculo kwizihlandlo ezikhethekileyo njengekaraoke ebusuku rhoqo ngoLwesine, ukuthengiswa komculo weNdlu X kwimigqibelo yangoMgqibelo kunye ne-brunch yangeCawa ye Fam.
5. URhapsody's Ikeja
I-mike yedolophu yase-Ikeja ithatha imilo eyahlukileyo ebusuku, apho abathengi bayagoduka kwaye umcimbi uqala. Ibhendi ephilayo iyakwenza ukuba ulahlekelwe ngumkhondo wexesha njengoko ucula kwaye ucula kunye. Le ndawo ixhobisa ubomi bobusuku besi sixeko kwaye ngokuphikisayo yenye yezona kophahla ziphakamileyo zephahla eLagos.
6. Uphahla lomoya
Lo mnyango wale ndawo ugcwele izityalo ukuze uzive ngathi ukwisitiya sanamhlanje. Kukho ithuba eliphezulu lokubhabha kulowo uthandayo. Zilungiselele kule ndawo u-Instagram-ufanelekile. Ukuba ungumthandi wezemidlalo, oku kungaphindwa kabini njengeziko lokujonga kunye nendawo efanelekileyo yokuphumla ngesiselo sakho osithandayo, singasichaza njani isikrini esikhulu se-LED? Sincoma ukuba undwendwele ngokuhlwa, ukuthintela ilanga elitshisayo kunye nemini eyaneleyo yelo selfie.
Le bar isephahleni kophahla lwehotele iMaison Fahrenheit, evulwa ngo-12: 00 pm-4: 00 mihla le. Asides the calura aura yendawo, ulwandlekazi lweAtlantiki lusebenza njengesakhelo esithandekayo kwaye banika ii-cocktails ezizodwa nezikhethekileyo Sukuthatha nje izwi lethu kuyo, zama i-cocktail ekhethekileyo ye-Maison kwaye ngokungaphumeleli, i-burger yabo yaseMexico. Umculo ulungile, ngakumbi ngeempelaveki.
Icebiso: Ungalibali kakhulu, indawo yokupaka ibonakala igcwele ngeempelaveki (ngokuhlwa).
Nokuba yindawo ephezulu yesibhakabhaka ene-vistas emangazayo okanye i-gem eluqilima eluphahleni eluphahleni, iikhowudi zokunxiba ziyahluka ngokweendawo, kungcono ukuba ukhuseleke kunokuxolisa. Cinga "ubukrelekrele" kwaye uphephe ukujongeka njengabafika nje kwimbutho yokuzivocavoca okanye ungazifumana uhleli kwindawo yokhuseleko ezantsi kwinqanaba lesitrato, utsalele umnxeba kubahlobo bakho ubacela ukuba behle bazokujoyina kwindawo yokuthengisa ibhiya ngaphaya kwendlela. . Ke unxibe ngokufanelekileyo, ubetha itrafikhi ukuze ubambe imbonakalo ephakamayo yelanga kunye nexesha lakho kude kuhlwe ngorhatya kwezi zakhiwo zophahla zimangalisayo eLagos.
Sisenokuba sizishiyile iindawo ozithandayo eziphezulu kophahla. Zive ukhululekile ukubakhankanya kwicandelo lokuphawula. indawo yokutyela ephezulu
umoya ophahleni lekki Amanqaku amane ngu-sheraton ikeja mzi mall Ihotele ye-lagos yelizwekazi ihotele Fahrenheit Ihotele Isiduko uphahla lwephahla kwi-lagos Yi-80 Indawo yokuphumla ye-autbiography uphahla lweofisi nophahla lokujonga Amanzi lagos
UVivian Bens-Patrick Ngamana 27, 2020